Wi-Fi 7 dia manakaiky ary manakaiky i Intel ary milaza i Intel fa tena ilaina izany | Avy amin'ny Linux
nefa na ny indostria na ny ankamaroan'ny mpamatsy internet eto amin'izao tontolo izao dia samy tsy nandray Wi-Fi 6 ary efa mandondom-baravarana ny Wi-Fi 7 mba hanamarihana ireo taranaka Wi-Fi vaovao izay handray fifandraisana amin'ny sehatra manaraka. Ny taranaka manaraka amin'ny fenitra Wi-Fi dia Wi-Fi 7 ary i Intel dia manolotra azy ho tsy maintsy ananana.
Rehefa mamorona fenitra indostrialy dia ilaina ny mitady vahaolana iraisana. Voalohany, ny Wi-Fi Alliance dia naka fomba vaovao amin'ny fanomezana anarana. Izany dia manome ny mpampiasa ireo teny mora takatra momba ny teknolojia Wi-Fi tohanan'ny fitaovana sy ny fampifandraisana azy ireo amin'ny tamba-jotra Wi-Fi.
Nandritra ny roapolo taona lasa izay, ireo mpampiasa Wi-Fi dia tsy maintsy nitolona tamin'ny fifanarahana anarana ara-teknika sarotra mba hamaritana raha nanohana ny Wi-Fi farany navoarin'izy ireo ny fitaovan'izy ireo. Ankehitriny, ny rafitra manome anarana dia notsorina tamin'ny heviny fa ny taranaka Wi-Fi dia nisaina araka ny ambaratonga lehibe indrindra amin'ny fanatsarana.
Izany dia ahafahan'ny orinasa sy mpanome tolotra manohana ireo rindranasa vaovao sy vao misondrotra amin'ny tambajotram-pifandraisan'ny faritra eo an-toerana (WLAN) iray ihany nefa manome serivisy avo kokoa noho ny fampiharana taloha.
5G dia serivisy finday ary Wi-Fi 7 dia teknolojia fidirana an-tariby fohy. Ny Wi-Fi 7 vaovao dia mizara ny toetran'ny 5G, ao anatin'izany ny fanatsarana ny fahombiazany.
Miaraka amin'ny Wi-Fi 6, Wi-Fi Alliance dia nampiditra fiarovana tsara kokoa amin'ny WPA3, ny farany sy lehibe indrindra amin'ny fiarovana Wi-Fi. Ary fanatsarana lehibe kokoa ny latency, fanatsarana hatramin'ny 75% ny faharetana. Wi-Fi 6, noho izany, teknolojia izay, avy aminy, dia mitondra fanatsarana lehibe mihoatra ny taranaka teo aloha.
Wi-Fi 6 dia manome refy avo efatra heny mihoatra ny teknolojia vaovao manodidina ny OFDMA ary fitantanana fanelingelenana tsaratsara kokoa, indrindra indrindra, mampiasa fahaiza-manao betsaka kokoa izahay hanao fidirana voalahatra bebe kokoa ary noho izany QoS tsaratsara kokoa.
Amin'ny Wi-Fi 7 dia hisy ny fahaiza-manao bebe kokoa sy ny fanohanana hatramin'ny 7 gigahertz ary koa ho an'ny tarika ambany izay ahafahan'ny mpampiasa manana rindranasa IoT (Internet of Things) toy ny sensor izay tsy dia mila bandwidth. Ka io dia karazana fampiasana hafa tanteraka amin'ny fampiasana Wi-Fi vaovao.
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fahamaimaizina, dia hahatonga ny tambajotra ho faritana voafaritra kokoa, miampy ny faharetan'ny latency anananao, dia ho fantatra mialoha kokoa ny tambajotra ary tena zava-dehibe amin'ny fampiharana indostrialy maro izy io.
Ny fampandrosoana ny Wi-Fi 7 dia mandeha ary mandeha ary mety maharitra dimy taona, ka farafaharatsiny 2024 dia tsy hahita vokatra ara-barotra amin'ny taona ho avy miaraka amin'ny Wi-Fi 7, fa zavatra tokony hotadidina ao an-tsaina ny mahita ny fomba fijery sy ny karazana fanatsarana tokony andrasana.
Wi-Fi 7 endri-javatra sy ny fahaiza-manao dia mbola eo an-dalam-pandrosoana ao anatin'ny fanamarinana, IEEE, ao anatin'ny tetikasa 802.11b. Saingy zava-dehibe ny manomboka mahazo valiny ary ahazoana antoka fa manaraka sy manara-maso ireo mpampiasa sy mampiasa tranga.
Ny fahaiza-manao hafa izay faritana dia manondro Fantsona 320 megahertz, noho izany dia avo roa heny ny haben'ny fantsona ho an'ny fenitra Wi-Fi 7.
Raha teôria dia natao hampitomboana avo roa heny ny fahaizana raha ampitahaina amin'izay azontsika atao ankehitriny amin'ny fantsom-pahitalavitra 160 megahertz sy ireo fiasa rehetra izay dinihina ihany koa, ary tena mahaliana, no antsoina hoe multilink operation.
Ka ny Wi-Fi 7 dia hanana fampisehoana ara-batana teorika efa ho avo dimy heny noho ny Wi-Fi 6. Fa mazava ho azy ireo zavatra ireo izay manana point fidirana sy mpanjifa, izay manana fantsona betsaka indrindra ary miasa amin'ireo fantsona 320 megahertz ireo, izay mampiasa ihany koa ny maodely avo indrindra, noho izany teorika izany.
Ka raha mandinika tranga azo ampiharina isika izay ahafahantsika manana teboka fidirana sy mpanjifanay, ary aiza ny mpanjifa amin'ny ankapobeny no mieritreritra onja roa, ary miaraka amin'ny fanovana samihafa, 256 sy 1K na 4K, dia mbola mahazo bitrate maro gigabit isika rehefa mampiasa fantsona 320 megahertz izay tokony ho azo alaina amin'ny renirano roa habakabaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny Wi-Fi 7 dia manakaiky kokoa ary milaza i Intel fa tena ilaina izany
Aogositra 2021: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software